Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Abongikazi base-Ontario: Inkxalabo yeNgcwaba kwiSicwangciso esitsha sokuVula kwakhona
Urhulumente wase-Ontario uphosa isilumkiso emoyeni kwaye ubeka emngciphekweni inkqubela phambili eyenziwe liphondo ekugcineni ukusasazeka kwentsholongwane ye-COVID-19.
Umbutho wabongikazi obhalisiweyo wase-Ontario (RNAO) uthi amandla ephondo okulawula ukusasazeka kosulelo njengoko sisiya kwiinyanga ezibandayo singcakaza sisicwangciso sokuvulwa kwakhona esiphakamisa umda wokusebenza ukusukela ngoMvulo wama-25 ka-Okthobha, kwaye uyaphela. amanyathelo ezempilo yoluntu - kubandakanywa nokufuna ubungqina bokugonywa - kwangoko ngoJanuwari.
I-RNAO ikwaxhalabile kakhulu urhulumente wakhetha ukungabhengezi ugonyo olusisinyanzelo kubo bonke abasebenzi bezempilo kuwo onke amacandelo kunye nezicwangciso. Lo myalelo sele ulungele abo basebenza ngononophelo lwexesha elide, kunye nomhla wokugqibela wokuthobela ngoNovemba 15. Izibhedlele ezininzi zokunyamekela ngokukhawuleza zithatha isenzo esifanayo. Nangona kunjalo, le ndlela yokujongana nomgaqo-nkqubo ngurhulumente we-Ford ishiya izigulane kunye nabasebenzi kwizibhedlele ezininzi, ukhathalelo lwasekhaya kunye nezinye iindawo zoluntu kwinqanaba eliphezulu lokuba semngciphekweni ukuba abasebenzi abangagonywanga bashiya indawo enye ukuya kwenye eneemfuno ezilula ngakumbi.
Ukufuna ukuba bonke abasebenzi bezempilo nabezemfundo bagonywe ngokupheleleyo ngumgaqo-nkqubo osekelwe kubungqina, oqale wabizwa yi-RNAO ngoJulayi 2021, kwaye kutshanje uxhaswe yiTheyibhile yezeNzululwazi karhulumente. Ukungasihoyi isiluleko esinjalo kubetha ingqiqo, kukungakhathali kwaye kubeka esichengeni ukhathalelo lwezigulane kunye nokhuseleko lwabasebenzi.
I-RNAO ibongoza abantu ukuba baqhubeke nokusayina i-Action Alert ifuna ukuba iNkulumbuso i-Ford yandise ugonyo olusinyanzelo kubo bonke abasebenzi bezempilo kunye nezemfundo kwaye baseke iindawo ezikhuselekileyo ezingqonge iindawo zabo zokusebenza. Umbutho uthi la ngamanyathelo ayimfuneko ukujongana ngqo ne-COVID-19.